बोल्नु पर्नेले नबोल्ने, काम गर्नु पर्नेले बोलिराख्दा समस्या भयो : चन्द्र भण्डारी [अन्तर्वार्ता]
हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्‍यौं । संविधानपछि तीनवटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं । निर्वाचनमार्फत् नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएर जनताले सरकारमा पुर्‍याए । तर नेकपाको सरकाले देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, विकास निर्माणको दिशातर्फ लैजानुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले देशलाई झन संकटमा फसाइरहेको छ । न सत्य निरुपण आयोग बनाएर द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन सक्यो न शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षा गरेका अन्य आयोगहरू बनाएर देशलाई द्वन्द्वबाट उन्मुक्ति दिन सक्यो । न जैविक तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्न सक्यो ।
देशलाई संविधानविपरीत गएर धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले बिखण्डन गराउने कामहरू भए । देशको जुन धर्म थियो, जुन संस्कृति थियो, असंवैधानिक रूपमा त्यसलाई समाप्त पार्नका लागि यो सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा देशमा झन् अस्थिरताको शुरूवात भएको मैले महसुस गरेको छु ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीले मुद्दाहरूको उठान गर्ने हो । त्यसलाई सत्तापक्षले औषधिका रूपमा ग्रहण गर्ने हो । तर नेपालमा कस्तो भयो भने कम्युनिस्टहरूले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा तोडफोड गर्थे । बन्द हड्ताल गर्थे । सदन चल्न नदिने, योजनाहरू आउन नदिने काम गर्थे । सोही कारणले अहिले आम जनमानसमा प्रतिपक्षी भनेकै त्यस्तै हुनुपर्ने हो कि भन्ने परेको छ ।
हामीले त मुद्दा उठाएका छौं । हाम्रो कमजोरी के मात्र हो भने प्रतिपक्षी नेता कम बोल्नुहुन्छ, सत्तापक्षीय नेताहरू धेरै बोल्नुहुन्छ । जुन नेता बढी बोल्नुपर्छ, ऊ नबोल्ने जुन नेता नबोली खुरुखुरु काम गर्नुपर्ने हो ऊ बोलिराख्ने स्थितिले गर्दा नेपालमा अहिलेको समस्या आएको हो ।
हाम्रो कमजोरी के मात्र हो भने प्रतिपक्षी नेता कम बोल्नुहुन्छ, सत्तापक्षीय नेताहरू धेरै बोल्नुहुन्छ । जुन नेता बढी बोल्नुपर्छ, ऊ नबोल्ने जुन नेता नबोली खुरुखुरु काम गर्नुपर्ने हो ऊ बोलिराख्ने स्थितिले गर्दा नेपालमा अहिलेको समस्या आएको हो ।
सरकारको काम कारवाही
यो सरकार नेपालको यति ठूलो गौरवपूर्ण इतिहासलाई ध्वस्त गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको छ । धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले सरकार कुनै अमूक र विवादास्पद् आईएनजीओको पक्षमा छ भन्ने देखायो भने सैन्य हिसाबले भारतसँग मिलेर सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णयले नेपालको स्थान चीनका लागि कहाँ रह्यो भन्ने प्रश्न उठायो ।
क्रिश्चियन संस्थाले गरेको कार्यक्रममा सरकार नै आयोजक बनेपछि नेपालको स्थान भारतका लागि कहाँ रह्यो भन्ने प्रश्न उठायो । त्यसो भए दुई ठूला छिमेकीको बीचमा नेपाल खै ? ओलीजीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो स्थान कहाँ हो देखाइदिनुपर्‍यो, अब ।
यो सरकारले कुनै नयाँ र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान सक्ने आर्थिक योजना ल्याएकै छैन । रेल ल्याउने भनेको छ, पानीजहाज ल्याउने भनेको छ तर हाम्रो स्रोत नै छैन । आफ्नो हातमा केही पनि छैन । जहाज ल्याउने प्रक्रियामा ६/७ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्ने आएको छ, त्यसलाई कारवाही गर्नु छैन, हावा कुरा गरेर कसरी आउने रेल र पानीजहाज ? भ्रष्टाचारले आकाश छुन लाग्यो ।
राज्यले दैनिक रूपमा आफ्नो प्रशासन नै चलाउन सकेको छैन । न त शान्ति प्रक्रिया र यसको व्यवस्थापनको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नै लिएको छ । कसले भन्यो सरकारले देशलाई समृद्धिमा लैजाँदै छ भनेर ? देख्नुभएको छैन जनताको असन्तुष्टि ?
अधिनायकवादको शुरूवात ?
यो सरकारलाई के अधिनायकवादी भन्नु ? अरूको इशारामा चल्ने सरकार पनि 'अधिनायवादी' हुन्छ ? यो सरकार कठपुतली सरकार हो । विदेशीहरूको इशारामा नाच्ने 'कठपुतली सरकार' ।
(नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता चन्द्र भण्डारीसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा अाधारित)
कांग्रेसभित्रको राजनीति : सिटौलाले छाडे पौडेलको साथ, पौडेलले दिए देउवालाई अल्टिमेटम
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानून ल्याउन महिला सांसदहरूको माग
सेनामा रोजगारी : शुरू भयो रोकिएका भर्ना प्रक्रिया [सूचनासहित]